Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Aterlọ nkwari akụ Inkaterra dị na Peru maliteghachi ọrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Akụkọ kacha ọhụrụ na Peru • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Inkaterra Machu Picchu Pueblo nkwari akụ
Inkaterra, Hospitallọ oriri na ọ Peruụ luxuryụ dị oke ọnụ nke Peru na eco-tourism brand, amaliteghachila ọrụ n'ofe pọtụfoliyo nke ụlọ nkwari akụ naanị n'oge maka afọ ọhụrụ.
Thedị a, nke na-eme emume ncheta afọ iri anọ na ise ya, amalitela ịnabata ndị ọbịa na akụrụngwa ya asaa dị na Peru mgbe ha kwụsịtụrụ ọrụ ha nwa oge n'oge ọnwa niile, mkpọchi mba niile na nzaghachi nke Covid-19 ọgbaghara. A na-agbaso ịdị ọcha nke mba niile, mkpuchi mkpuchi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Na November 1, Peru malitere ikwe ka ndị njem si North America banye na ihe akaebe nke nyocha Covid na-adịghị mma nke emere n'ime awa 72 ịhapụ njem site na obodo dị iche iche US site na ụgbọ elu na-adịghị akwụsị akwụsị na Lima. N'ime izu ole na ole gara aga, Peru maliteghachiri ọtụtụ ọrụ njem, gụnyere njem ụgbọ elu mba ụwa, na-anabata ndị njem na-abata na ụgbọ elu dị ogologo nke si Europe.
“Ọ bụ n’oké ịnụ ọkụ n’obi ka Inkaterra meghere ụzọ ya ọzọ, jiri usoro nkwekọrịta zuru oke iji mee ka ahụmịhe na-agaghị echefu echefu echefu,” ka onye guzobere na onye isi oche José Koechlin kwupụtara. “Mgbe ọnwa nke mkpọchi gachara, ụwa chọsiri ike ịkwapụ ọzọ, iji nwete nnwere onwe site na njikọta na ọdịbendị na ọdịdị dị iche iche na mba ọzọ. Inkaterra na-emezu agụụ afọ a, na-ekerịta ndị ọbịa anyị niile eziokwu ma na-agba ume inwe mmetụta dị mma na gburugburu ebe obibi. ”
Emepere Inkaterra Reserva Amazonica na Koechlin na 1975 wee soro Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel na 1991, nke ga-eji nku ohuru ohuru ohuru gbasaa. Ihe oru ohuru nke Inkaterra bu ulo oru ohuru ohuru na Peru si Pacific n'ụsọ oké osimiri na Cabo Blanco, setịpụrụ ịmalite na 2021.